Vaimbove Varwiri veRusununguko Vokumbira Veruzhinji Ruregerero
VaZvakanyorwa Wilbert Sadombo (vakasunga tayi), Va Wilfred Marimo (vane kepisi) nevamwe
Vamwe vevaimbove varwiri vehondo yerusununguko vakumbira ruregerero kuruzhinji rwavanhu vavakatyorera kodzero dzavo muzimbabwe, vachiti kubva nhasi zvichienda mberi, havasi kuzobvuma kushandiswa nevezvematongerwo enyika, sezvavakaitwa nebato reZanu PF.
Mashoko aya abuda apo vaimbove varwiri vehondo ava vanga vachiparura boka idzva rinokurudzira runyararo munyika rinonzi War Veterans Peace Initiative
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vaimbove varwiri vehondo ava, avo vari pasi pesangano reZimbabwe National War Veterans Association, ZNLWVA, vanoti munyika hamuna runyararo izvo zvinotadzisa budiriro mukati menyika.
Munyori mukuru muboka idzva reWar Veterans Peace Intiative, VaZvakanyorwa Wilbert Sadomba, vati zvinosuwisa kuti makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga, muZimbabwe machine mweya wehondo nemhirizhonga, uye vamwe vavo vachiri kushandiswa kuita zvemhirizhonga.
VaSadomba vati izvi ndozvapa kuti vapinde muhurongwa hwekuvaka hwaro hwerusununguko
VaSadomba, avo vari muchikwata chinotsigira VaChris Mutsvangwa, sachigaro weZNLWVA, vati apo nyika yakatarisana nesarudzo dza2018, zvizvarwa zveZimbabwe zvofanirwa kubatana mukurwisa mhirizhonga kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo.
VaSadomba vatiwo zvinosuwisa kuti munyika machine vanhu vasingadi runyararo, vane zvavanowana nemhirizhonga
Vachipa muenzaniso waSaul wemubhaibheri, sachigaro weboka rerunyararo iri, VaWilfred Marimo, vati sevarwi verusununguko vanokumbira kuregererwa neruzhinji pane zvavanopomerwa uye zvakaitwa nevamwe vavo vaimbunyikidza veruzhinji.
VaMarimo vati vanotarisira kushanda nemasangano akasiyana siyana mukuparidza shoko rerusununguko.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, VaTinashe Muzamhindo, vanoti zviri kuirwa nevaimbove varwiri verusununguko zvinoratidza kuti vava kuonawo zvavaitadza uye danho ravatora rekukumbira ruregerero rinoita kuti vabatane nevamwe mukurwira kodzero dzemunhu wese.
Sangano reZimbabwe National War Veterans Association rine zvikwata zviri kurwira masimba, chimwe chikwata chichitungamirwa naVaPatrick Nyaruwata, chimwe naVaMutsvangwa.
Makatanwa aya panyaya yehutungamiri ari mumatare edzimhosva, kunyange hazvo paine mutongo wekuti chikwata chaVaMutsvangwa ndicho chinocherechedzwa nemutemo.
America neIran Dzopesana paNyaya yeZimbabwe paZuva Rekupemberera Kuzvitonga Kuzere
Zimbabwe Yopemberera Zuva Rekuwana Kuzvitonga Kuzere
Vanhu Mamiriyoni Matatu Vofa neCovid-19 Pasi Rose
VaMavhunga naVaMafararikwa veMDC Alliance Vanomiswa Mudare Vari Mumibhedha Yavo Muchipatara cheParirenyatwa
Prince Philip Vanovigwa kuBritain Vazhinji Vachiona Hurongwa Uhu paMadandemutande